लक्ष्मी बैंकको मुद्धतीमा पनि १० % ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले “लक्षित मुद्दती–रिकरिङ्ग डिपोजिट” मानिंदै आएको ब्याजदरलाई बढाई १० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने भएको छ । लक्ष्मी बैंकको लक्षित मुद्दती खाता जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको बचत योजना रहेको बैंकले जनाएको छ । यो “लक्षित मुद्दती” रिकरिङ्ग डिपोजिटमा ग्राहकहरुले न्यूनतम रु. ५०० देखि...
पाल्पाको तिनाउमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा सोमबार पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ । यस जिल्लामा बैंकको यो दोस्रो शाखा हो । अब, लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ४१ जिल्लामा ७८ वटा, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९८ एटिएम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स् अनि ४०० भन्दा बढी मोबाईल एजेन्टहरु पुगेका छन् । यी...
प्रहरीचौकी निर्माणमा लक्ष्मी बैंकको सहयोग
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले सुनसरी जिल्लाको भोक्राहामा नयाँ शाखाको शुभारम्भ गरेको अवसरमा भोक्राहामा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि रु ५ लाखको सहयोग प्रदान गरेको छ । सोे शाखा कार्यालयको समुद्घाटन समाराहमा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्गले भोक्राहा प्रहरी चौकी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार...
तल्लो लिखूमा लक्ष्मी बैंकको नेतृत्वमा बैंकहरुले ५.५९ अर्ब ऋण लगानी गर्ने
काठमाण्डौ । रामेछाप र ओखलढुंगाको सीमामा पर्ने लिखु खोलामा निर्माण हुने २८.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो लिखू जलविद्युत आयोजनामा लक्ष्मी बैंकको नेतृत्व(कन्सोर्टियम लिड)मा ४ वटा बैंक र एक कम्पनीले ५ अर्ब ५९ करोड ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमीटेडले यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । ऋण लगानी गर्ने...
किन कारबाहीमा परे लक्ष्मी र मेगा बैंक ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात(सिआरआर) नपुर्याउने २ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा पर्ने बैंकमा मेगा र लक्ष्मी रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । यो व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म सिआरआर...
सुर्खेतको सिम्टामा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा सोमबार सुर्खेतको सिम्टामा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो जिल्लामा बैंकको योे दोस्रो शाखा हो । अब, लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ७७, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९८ ए टि एम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् अनि ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले...
लक्ष्मी बैंकको एकैदिन २ शाखा बिस्तार
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा बुधबार तनहूँको म्याग्दे र सुनसरीको भोक्राहा गाउँपालिकामा एकै साथ आफ्नो दुई नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यी जिल्लाहरुमा बैकंको यीे क्रमशः दोस्रो र तेस्रो शाखाहरु हुन् । अब, लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ७६, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९८ ए टि एम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स् अनि...
लक्ष्मी बैंकको नाफा बढ्यो, इपीएस र रिजर्बमा पहिरो !
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा खूद नाफामा राम्रो बढोत्तरी गरेको छ । यो अवधिमा बैंकको खूद नाफा ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँको उचाईमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो बैंकको नाफा ४० करोड ६३ लाखमा सीमित थियो । नाफामा राम्रो वृद्धि गरे पनि बढेको पूँजी अनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा बैंकको प्रतिसेयर...
लक्ष्मी बैंकले ल्यायो नर्भिक प्रिभिलेज कार्ड, ग्राहकले उपचारमा छुट पाउने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले हालै नर्भिक प्रिभिलेज डेविड कार्ड प्रस्तुत गरेको छ । विद्यमान खातावालाहरुले आफ्नो कार्डलाई बैंकले तोकेको न्यूनतम रु. ५००० मौज्दात कायम गरी उक्त प्रिभिलेज कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने बैंकमा खाता नभएका ग्राहकहरुले लक्ष्मी बैंककमा खाता खोली रु २५० माग्रिन इ–बैंकिङ्ग प्याकेजको सुविधासहित सम्पूर्ण...
लक्ष्मी बैंकको भाइबर सेवा प्रारम्भ
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले समेत भाइबर बैकिङ सेवाको सुरुवात गरेको छ । नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय भएको म्यासेजिङ्ग प्लाटफर्म– भाइबरमा लक्ष्मी बैंक हालै आबद्ध भएको जानकारी सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं । भाइबरको “लक्ष्मी बैंक पब्लिक एकाउन्ट”मा आबद्ध भएपछि विभिन्न बैंक सम्बन्धित सूचनाहरु सहज रुपमा तत्कालै प्राप्त गर्न...
यसरी पुग्यो लक्ष्मी बैंकको पुँजी, एभरेष्ट बैंकसँगको मर्जर टरेकै हो ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको बिहीबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष शम्भुुप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न १७ औं वार्षिक साधारणसभाले हाल चुक्तापूँजीको १० प्रतिशतको दरले बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस सेयर पारित भएसँगै...
नियमित बचतकर्तालाई पनि मुद्धतीको झै ब्याज, लक्ष्मी बैंकले ल्यायो नयाँ योजना
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले नियमित रुपमा बचत गर्ने सानादेखि ठूला निक्षेपकर्तालाई लक्षित गरी मुद्धती निक्षेपमा नयाँ खालको योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले “लक्षित मुद्दती” नामको नयाँ प्रोडक्ट सार्वजनिक गरेको हो । यो योजनालाई नियमित आम्दानी हुने ग्राहकहरुका लागि मासिक बचतमा उच्चतम ब्याज प्राप्त गर्न सकिने विकल्पको रुपमा...
लक्ष्मी बैंकको साधारणसभा मंसिर २८ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आगामी मंसिर २८ गते बिहीबारका दिन १७ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकले काठमाण्डौको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभामा ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश, १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको निर्णय विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश हुने बताइएको छ । अध्यक्ष, संचालक लगायतको...
कञ्चपुरको झलारी र कैलालीको बौनियाँमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले बिहीबारदेखि कञ्चनपुरको झलारी र कैलालीको बौनियाँमा एकसाथ दुुई नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । यी दुवै जिल्लामा बैंकले संचालन गरेका नयाँ शाखा दोश्रो शाखा हुन् । यी दुुई शाखासहित अब लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ७४, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९५ एटिएम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स् अनि ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु...
लक्ष्मी बैंकले पनि मल्टी करेन्सी कार्ड ल्याउने, एक्सिस बैंकसँग सम्झौता
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेड र भारतको एक्सिस बैंकबीच कात्तिक २८ गते भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउन तथा भारत लगायत अन्य मुलुक भ्रमण गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्ने प्रिपेड कार्ड संयुक्त रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । जसअन्तर्गत एक्सिस बैंकको तीन हजार पाँचसय बढी शाखामार्फत पठाइएको रकम नेपालस्थित लक्ष्मी बैंकको...
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड–२ का इकाइहरु बाँडफाँड, नतिजा यसरी हेर्नुहोस्
नेप्सेमा थपियो पौने ११ लाख बढी कित्ता सेयर
सबैको लघुवित्तको सीईओमा केशवकुमार पौडेल पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त